Dr. Tint Swe's Writings: Gonorrhea ဂနိုရောဂါ
1. ကာလသားရောဂါနဲ့ ဂနိုရောဂါအကြောင်းသိချင်လို့ပါ ဆရာ။ဆရာ Fb ထဲမှာ ရှာမရလို့ပါ။
2. ဆရာခင်‌ဗျာ အမျိုးသား‌ရောဂါ၊ ဆစ်‌ဖလစ်‌၊ ဂနိုနဲ့ပတ်‌သတ်‌ပြီး ဆရာရေးတဲ့ post ကို ဖတ်‌ပါရ‌စေခင်‌ဗျာ။ ကျ‌နော့်‌ အသိတစ်‌‌ယောက်‌ကို link‌ ပေးချင်‌လို့ပါခင်‌ဗျာ။ medical writing ထဲမှာကျ‌နော်‌ရှာမ‌တွေ့လို့ပါဆရာ။
3. ဆရာခင်ဗျာ နားနဲ့မနာဖဝါးနဲ့နာပါခင်ဗျာ။ ကျွန်တော် ‘မာဆတ်’ မှ ကောင်မလေးနဲ့့ ကျိုးတယ်ခေါ်ရမလားဘဲ၊ ဆီးသွားလျှင် အောင့်ပြီ့း့ ထိပ်မှာ ပြည်လို့ထင်ရတဲ့အရည်များထွက်ပါတယ်ဗျာ။ ရှက်လွန်းလို့ ဘယ်သူ့မှ မပြောရဲပါဘူး။ ဆေးခန်းလည်းမသွားရဲပါသဖြင့် ဘာဆေးများဝယ်သောက်ရပါမလဲ ညွှန်ကြားစေချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
(အရင်ကတော့ ဒီလိုစာမျိုးတွေကို မတင်ပါ။ ၁၈ နှစ်ပြည့်မှဖတ်ပါ ဆေးပညာစာများ ‘ဘလော့ခ်’ ပျက်သွားလို့ တင်ရတာကို နားလည်မှုပေးစေလိုပါတယ်။)
ပိုးဝင်တာနဲ့ ၂ ရက်ကနေ ၁ဝ ရက်အတွင်း လက္ခဏာတွေပေါ်တယ်။ ဆီးအောင့်မယ်။ ခပ်ပြစ်ပြစ်-ခပ်ဝါဝါ အရေ ပန်းအဖျားကနေ ဆင်းမယ်။ အစေ့ရောင်မယ်၊ နာမယ်။ ဆီးကျိတ်ရောင်မယ်၊ နာမယ်။
ရောဂါရှိတဲ့ မအေက မွေးတုံးက ကလေးကိုလည်းကူးတယ်။ မျက်စိနာမယ်။ မကုရင် မျက်စိကွယ်နိုင်တယ်။
Penicillin G 10 million units IV နေ့စဉ်အကြောဆေး ၅ ရက်ဆက်သွင်းပါ၊ ဒါမှမဟုတ် Ceftriaxone 1 Gm IV နေ့စဉ်အကြောဆေး ၅ ရက်ဆက်သွင်းပါ၊ ဒါမှမဟုတ် Ciprofloxacin 500 mg တနေ့ ၂ ကြိမ်၊ ၅ ရက်သောက်ပါ၊ ဒါမှမဟုတ် Levofloxacin 500 mg တနေ့ ၁ ကြိမ်၊ ၅ ရက်သောက်ပါ၊
မကုသရင် ဆိုးဝါးတာတွေ ဖြစ်လာတတ်တယ်။ သွေးကတဆင့် တခြားနေရာတွေဆီ ကူးစက်မယ်။ နောက်ဆက်တွဲ ရောဂါတွေ ရှိလာရင် ဖျားမယ်၊ ဗိုက်နာမယ်၊ ဆီးလမ်း-မွေးလမ်းက တခုခုဆင်းမယ်၊ အဆစ်နာ၊ အရေပြားမှာ အနီရောင် အပြင်တွေ အလယ်က ခပ်မဲမဲဖြစ်မယ်၊ အားယုတ်မယ်၊ စအိုနာ၊ လည်ချောင်းနာမယ်။
ဆီးအက်စစ်ဓါတ် နည်းအောင် အစားအသောက် သတိပြုပါ။ အစပ်လျှော့စားပါ။ အသား၊ ငါး၊ အသဲ၊ ဥ၊ အရက်၊ ဘီယာ၊ ဝိုင်၊ ပေါင်မုံ့၊ ကော်ဖီ၊ လက်ဘက်ရည်၊ ပင်လယ်စာ၊ အသဲ၊ နှလုံး၊ ဝက်ပေါင်ခြောက်တွေက အက်စစ်ဓါတ် များစေပါတယ်။
အတွဲဆိုရင် နှစ်ယောက်လုံးတပြိုင်တည်း ဆေးသောက်သင့်တယ်။ ဆေးကုနေစဉ်မှာ အကာကွယ်မသုံးဘဲ အတူမနေသင့်ပါ။ လိင်ကတဆင့် ကူးစက်ရောဂါတခုခုရှိသူတိုင်း HIV ကိုလဲစစ်ရပါမယ်။ သံသယရှိတဲ့အပြုအမူနောက် ၃ လနေရင် စစ်လို့ရပါပြီ။ ဂနိုရီးယားဖြစ်သူတွေက ဆစ်ဖလစ်အတွက် VDRL သွေးစစ်သင့်တယ်။